Karnalikhabar » विराटनगरमा डुबेको सुर्य एरलाईन्सको जहाज बाढीले बगायो ! विराटनगरमा डुबेको सुर्य एरलाईन्सको जहाज बाढीले बगायो ! – Karnalikhabar
विराटनगरमा डुबेको सुर्य एरलाईन्सको जहाज बाढीले बगायो !
प्रकाशित मिति :2017-08-13 14:47:56
विराटनगर । तराई मधेसका जिल्लाहरुमा शुक्रबार रातिदेखि जुनप्रकारको विपत आइलाग्यो, यो सम्भवतः ०७२ साल बैशाख १२ को महाविपत्तिपछिको अर्को ठूलो प्राकृतिक प्रकोप हो नेपालका लागि । पहाडमा भूकम्पपछि जुनप्रकारको वपित आइलागेको थियो, अहिले मधेसमा त्यस्तै महाविपत्ति देखिएको छ ।
तराईका जिल्लामा आएको बाढीले गरेको कटान र डुबान अनि पहाडमा खसेको पहिरोले महाभूकम्पले जसरी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षती नगरे पनि यसले सिर्जना गरेको ज्ञासदी र देश विकासमा पार्न सक्ने प्रभाव दीर्घकालीन प्रकृतिको छ ।तत्कालका लागि बाढी पीडितहरुको गास र बासका लागि राहत संकलन एवं उद्धारमा सबैले जुट्नुपरेको छ ।
मौसम विज्ञान विभागले शनिबार राति र आइतबार
समेत भारी वर्ष हुने बताइरहेका बेला तराईका अधिकांश जिल्लामा जनता पानीमा डुबिरहेका छन् । जतासुकै हाहाकार र त्रास छ । अझै कति जनधनको क्षति हुने हो भन्ने स्पष्ट छैन । भएको क्षतिको पनि सबै विवरण आइसकेको छैन ।
शनिबार साँझसम्म गृहमन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार बाढी पहिरोका कारण ३० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा गर्भवती, वालवालिका र वृद्धवृद्धासमेत छन् ।पश्चिम नेपाललाई जोड्ने राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा पुलहरु भत्केका छनत्, जसले गर्दा हजारौं यात्रुहरुका बाटामा भोकभोकै अलपत्र परिरहेका छन् ।
झमझम पानी दर्किइरहेको छ । गाउँ शहरमा मानिसहरुको भाग दौड छ । यस्तो लाग्छ, सिंगै मुलुक एउटा संकटकालको सामना गरिरहेको छ ।नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी त आउने गरेकै हो, तर यस्तो प्राकृतिक प्रकोप कतिपय मानिसले आफ्नो जीवनकालमै महसुस गरेका थिएनन् । झापामा इतिहासमै पहिलोपटक यतिठूलो बाढी आएको र गउाँ र शहरहरु जलमग्न बनेको स्थानीयको अनुभव छ ।
सुनसरीको इटहरीमा ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । इटहरी बजार इतिहासमै पहिलोचोटि जलमग्न भएको छ । पाँचथर, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा पहिरोमा परी मानिसहरुको ज्यान गएको छ ।सप्तरीको अधिकांश भाग डुबानमा परेको छ ।
सिराहा, धनुषा लगायत लगायत मधेसका जिल्लाहरु लगमग्न छन् । रौतहटको ८० प्रतिशत भूभाग जलमग्न बनेको छ । राप्तीमा ठूलो विपत आइसकेको छ र थप विपतको घण्टी बजिरहेको छ ।नेपाल सरकारले पटक-पटक सबै ढाको खोल्न आग्रह गर्दा पनि सप्तकोशीका सबै ढोकाहरु खोलिएका छैनन्, जसले गर्दा सुनसरी र मोरङका जनता थप त्रशित छन् ।